Uma uya abazingeli Russian ngesicelo sibala izinja emihlanu phezulu, bese ngokuqinisekile kulolu hlu esiyoba ehamba phambili endaweni spaniel Russian. Lena namanje uhlobo abasha kakhulu yasungulwa eSoviet Union. Umphakathi wamazwe ngamazwe inja bokudla (FCI) ingakamiswa ayibonwa.
Ekupheleni kwekhulu le-nesishiyagalolunye e laseRussia aqala ukungenisa ahlukahlukene izinhlobo spaniels. Abaningi babo kwakungabantu Cockers. Babezama yokuzingela, kodwa izinja esiyisigqigqi kwakungafanele iyasiza izifunda Russian. Ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili abalimi waqala ukhetha phezulu, izinja uyisififane ezivela phesheya waqala ukuloba Springer ngoba sekuvele uhlobo olusha.
Izinga lokuqala zohlobo Spaniel Russian yethulwa ngo-1951 futhi ejwayelekile ingasebenza modified yamukelwa nesishiyagalolunye ayisithupha nesithupha ngonyaka. Russian Spaniel zohlobo esetshenziselwa abazingeli emkhakheni, ixhaphozi, asemaqeleni kanye Waterfowl ku insimu yase Russia. Thola inyoni, pick it up nalapho shot umzingeli ezimlalelayo ukuze alethe yimpango kwalimala - umsebenzi okumele wenziwe spaniel Russian. Incazelo zohlobo, okuyinto ingatholakala zonke izinkomba Canine uqinisekisa ukuthi inja ubhekana imisebenzi "olusemthethweni".
Spaniel Russian has a uhlamvu ethule futhi kunokulinganisela yini. Lesi silwane asebenzayo, friendly, ukudlala futhi obathandayo kakhulu. Olungenamkhawulo uthande oya emakhosini azo, wonke umkhaya kuzo nalezo aphila kuzo. Ngokuphelele elingenalo ubudlova, isimo sengqondo esiqondile ekufezeni ezifuywayo, abahlala endlini.
Inja kwesiqu encane, nge ezinde, soft futhi kancane mihlobiso. Ekhanda lakhe yena sifushane futhi iqonde - lokhu spaniel Russian. Incazelo zohlobo, okungase atholakala Canine futhi wezilwane izincwadi, amanothi Imizimba eqinile futhi kwemisipha. Ukuphakama at sokubuna - 40 cm for kwabesilisa 38 cm azalela.
Zintathu izinhlobo umbala: ezinombala ofanayo, Tri-umbala, umbala ezimbili. Umsila emaningi ngasesinqeni, idokhwe nengxenye ubude yayo yasekuqaleni.
Ngaphezu ukusetshenziswa ukuzingela kuyinto isilwane emangalisayo. Ezinganeni okungcono futhi kumnandi kakhulu abane-ezinemilenze umngane - spaniel Russian. Incazelo zinhlobo, onyatheliswe kuyi-standard, kuqinisekisa indlela abanobungane ngayo ngokwenama lokhu inja. Yingakho kufanele uzilungiselele Antics kancane sesilwane sakho. Angaba zephule iphepha noma ukudonsa ikhaya Slippers.
Ukudla okunomsoco - kungcono ukuthi kwakudingeka ukuba inja Spaniel Russian. Incazelo zohlobo uxwayisa nezici ezithile sesilwane ukuze kakhulu uma sezidla kanye isisindo somzimba.
Spaniel uthola okuhle efulethini idolobha kanye, kodwa kulokhu isidingo eside ehamba fresh air, umsebenzi.
Futhi ngenkathi lokhu ngokuqinisekile inja ukuzingela, umnikazi wanoma iyiphi isilwane esinjalo uzokutshela ukuthi ezilwanyana - spaniel Russian. Puppies, izithombe zazo ungabona kulesi sihloko, ngeke abashiye nandaba futhi abadala noma izingane.
Spaniel - okuhle, isilwane enhle okwedlula, okuzoba ngumngane omkhulu kuwo wonke amalungu omndeni wakho.
Intuthu amakati: zohlobo, izithombe
Ingabe umbala inja ukuhlukanisa? Umhlaba iso ubuhlalu
Kuzala, ukuzingela kanye izinja ukusebenza ekuphileni kwebantfu
Imithi 'Enterofuril' (Ukumiswa). Yokusetshenziswa
Amajuba ezemidlalo: ukugcinwa, ukunakekelwa
Umlingisikazi Anna Kovalchuk: Filmography, biography, kanye nempilo yakho. Kovalchuk Anna Leonidovna - actress Russian
Ifaka ikhodi zokusetshenziswa kabi kotshwala: Kuyini kubalulekile ukwazi
Uhlelo lokudala umculo
Ukuhlaziywa kwe-inkondlo Tiutchev "Ekwindla ka original ...". "Crystal" Welani imbongi
Hlangana umshwalense ejenti!